♪ PC အတွက်စွယ်စုံသုံး Video/Music Converter - Aiseesoft Total Media Converter v8.1.6 + Full Crack ♫ ~ ဘလော့ခရီးသည်
♪ PC အတွက်စွယ်စုံသုံး Video/Music Converter - Aiseesoft Total Media Converter v8.1.6 + Full Crack ♫
Video Format အားလုံးကို Convert လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Aiseesoft
Total Media Converter v8.1.6 နောက်ဆုံးထွက် Version လေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Video , Audio များကို မိမိလိုချင်သော Format ရရှိနိုင်အောင် Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ HD Quality ရှိသော Video များကိုပါ အရည်အသွေးမကျအောင် Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Convert လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ File Type တွေကတော့ MP4, AVI, RM, RMVB, QT, MOV, 3GP, 3G2, FLV, MPEG-1, MPEG-2, DVR-MS, VOB, MKV, ASF, DivX, OGM to MP4, AVI, WMV, 3GP, 3G2, FLV, MPG and SWF အစရှိတဲ့ အသုံးများတဲ့ Fromat တွေအပြင် အခြားသော Video , Audio , Format ပေါင်း 100 ကျော်ကို Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ကဲဗျာ တွေ့တဲ့အတိုင်းဘဲ တပျော်တပါးကြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အသေး စိတ်ကိုဆက်လေ့လာချင် ရင်တော့အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Full Version အဖြစ်အသုံးပြုနိုင် ဖို့လည်း Crack File ကိုပါ တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။
Audio: AAC, AIFF Audio Files (* .aif; *
aiff.), CUE, FLAC, M4A, MPEG Audio Files (* .mp3; * mp2.), Monkey’s Audio Files (* .ape), OGG, Raw AC3 Files (* .ac3), Real Audio Files (* .ra;. * ram), SUN AU Audio Files (* .au), WAV, WMA